Private Transfer from Aqaba to Petra or Petra to Aqaba - Tourist Jordan
Private Transfer from Aqaba to Petra or Petra to Aqaba
From $109 per Group
Private Transfer from Aqaba to Petra / Petra to Aqaba
Our Private Transfer service from Aqaba to Petra or from Petra to Aqaba offers a comfortable and reliable solution for transferring between these two points. Our driver will meet you at your hotel,
Our Private Transfer service from Aqaba to Petra or from Petra to Aqaba offers a comfortable and reliable solution for transferring between these two points. Our driver will meet you at your hotel, Aqaba Airport, or any other point in Aqaba and Petra, with a modern, fully licensed, and air conditioned vehicle. Relax en route and enjoy the changing landscapes of the route between Aqaba and Petra.
Our Private Transfer service from Aqaba to Petra or from Petra to Aqaba is available 7 days a week, 365 days a year. Journey time for the transfer from Aqaba to Petra is approximately 2.5 hours although during the rush hours.
Private Transfer from Aqaba to petra or petra to Aqaba – Available Vehicle Types
3 seat transfer
8 Day Ultimate Jordan Package Tour
Private Transfer from Aqaba to Dead Sea or Dead Sea to Aqaba
Private Transfer from Amman to Aqaba or Aqaba to Amman
Private Transfer from Aqaba to Wadi Rum or Wadi Rum to Aqaba